Xoghayaha Arrimaha Dibada Maraykanka John Kerry oo gaaray Magaaladda Muqdisho [Sawirro] | SAHAN ONLINE
Xoghayaha Arrimaha Dibada Maraykanka John Kerry oo gaaray Magaaladda Muqdisho [Sawirro]
Xoghayaha Arrimaha dibada dalka Maraykanka ayaa maanta ku tagay magaaladda Muqdisho booqasho aan horay loo shaacin,waxaana uu la kulmay Madaxda dalka iyo Madaxda maamulada dalka.
John Kerry oo muddo laba Saacadood ku sugnaa magaaladda Muqdisho ayaa booqashadan u noqoneysa Xoghaye Arrimo Dibadeedkii ugu horreeyey ee ka socda Maraykanka oo dalka soo booqda muddo labaatan sanno ah ka badan.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Iyo Raiisalwasaare Cumar Cabdirashiid ayaa kulan albaabadu u xirnaa la qaatay Xoghayaha Arrimaha dibada dalka Maraykanka iyagoona kawada hadlay arrimaha dalka.
Sidoo kale John Kerry ayaa kulan albaabadu u xirnaa la qaatay Madaxweynayaasha Maamulada Puntland,Jubbaland ,koonfur galbeed ,waxaana kulanka ku weheliyey Madaxweynaha iyo Raiisalwasaaraha dalka.
Xoghayaha Arrimaha dibada dalka Maraykanka ayaa la kulmay Madaxda AMISOM ,isagoona ku bogaadiyey howlaha nabad ilaalin ay ka wadaan dalka Soomaaliya isla markaana ay garab taaganyihiin.
Dawladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa la filayaa iney galabta war rasmi ah kasoo saarto booqashada Xoghayaha Arrimaha dibada dalka Maraykanka John Kerry ku yimid magaaladda Muqdisho iyo arrimihii ay isla soo qaadeen.
Ammaanka magaaladda Muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyey maanta ,waxaa la xiray wadooyinka ,iyadoona Ciidamo kala duwan lagu soo daadiyey hareeraha garoonka diyaaradaha ilaa KM4 taasoo adkeyn in la adeegsado.
Booqashada Xoghayaha Arrimaha dibada dalka Maraykanka John Kery weli horay looma sii shaacin ,isagoona goor dhaweyd ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee magaaladda Muqdisho.